Hlola i-Morocco - World Tourism Portal
Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eMorocco.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMorocco
Bukela ividiyo ngeMorocco
Bheka iMorocco izwe eliseNyakatho ne-Afrika olunogu lolwandle oNyakatho ne-Atlantic Ocean kanye nolwandle iMedithera. IMorocco ithole inkululeko yaseMorah Sahara yaseNorway e1973. Inemingcele ne-Algeria empumalanga nezindawo zaseSpain North North zaseCeuta neMelilla ogwini lweMedithera enyakatho. Ingapha nje kwe-Strait of Gibraltar kusuka eGibraltar.
Ngokomqondo ongokomfanekiso, iMorocco yakhiwa ikakhulukazi ama-Arabhu namaBerber noma ingxube yalawa. Amanani amakhulu amaBerber ahlala ikakhulukazi ezindaweni zezintaba zezwe, izindawo ezinde zokuphephela lapho alondoloze khona ulimi namasiko awo. Ezinye izingxenye zabantu ziyinzalo yababaleki abavela kuwo Spain kanye nePortugal eyabalekela iReconquista, ukuphinda kwakhiwa kobuKhristu kweNhlonhlo yase-Iberia eyaqhubeka kuze kube ngekhulu le-15th.
Izinsizakusebenza ezinkulu emnothweni wase Moroccan ezolimo, phosphates, ezokuvakasha kanye nezindwangu.
I-24 Apr-23 Meyi. Izinsuku eziqondile zincike ekubonweni kwezinkanyezi zasendaweni futhi ziyahlukahluka kuye ngezwe. URamadan uphela ngomkhosi we-Eid ul-Fitr oqhubeka ezinsukwini ezimbalwa.
Umcimbi omkhulu ekhalendeni laseMoroccan inyanga yeRamadan, lapho amaSulumane azila ukudla ngesikhathi sosuku futhi aphule ukushesha kwelanga. Izindawo zokudlela eziningi zivalelwa isidlo sasemini (ngaphandle kwalapho okunamathela ngokukhethekile kubavakashi) futhi izinto ngokuvamile zihamba kancane. Ukuhamba ngalesi sikhathi kungenzeka ngokuphelele, futhi nemikhawulo ayisebenzi kwabangewona amaSulumane, kepha kuyenhlonipho ukwenqaba ukudla, ukuphuza noma ukubhema esidlangalaleni ngesikhathi sokuzila. Kodwa-ke, izindawo "zabagibeli" zangaphandle zingaba nzima ukuthola noma yikuphi ukudla ngosuku. Ngokumangazayo lokhu kusebenza ngisho nasemadolobheni afana Casablanca. Ekupheleni kwenyanga kuba yiholide le-Eid al-Fitr, lapho yonke into ivalwa isikhathi esingangesonto futhi nokuhamba kugcwele njengoba wonke umuntu ebuyela ekhaya. Yize ukusetshenziswa kotshwala kungavunyelwe kubavakashi ngesikhathi seRamadan, izindawo zokudlela ezimbalwa kuphela nemigoqo Ngaphezu kwalokho, utshwala bungathengwa esitolo esikhulu uma isivakashi sikhombisa iphasiphothi yabo kubasebenzi (amaMoroccans abavunyelwe ukuthi bathenge noma baphuze utshwala phakathi nenyanga engcwele).
IMedithera yaseMedithera isingatha zonke izinhlobo zamadolobha namadolobhana, ukuboshwa okuningana kweSpain namachweba athile abalulekile
INorth Atlantic Coast engxenyeni esenyakatho yogu lwaseMoriya iyikhaya enhlokodolobha futhi Casablanca, igxunyekwe namadolobha asolwandle abekwe emuva
ISouth Atlantic Coast ugu oluseningizimu lubekelwe emuva, iyikhaya lamadolobha amahle asogwini afana ne-Essaouira ne-Agadir
High Atlas emboza izintaba eziphakeme ze-Atlas nezindawo ezizungezile kufaka phakathi Marrakech
I-Middle Atlas ehlanganisa izintaba zase-Middle Atlas nezindawo ezizungezile kubandakanya i-Fez neMeknes
ISahara yaseMoriya isifunda esikhulu sogwadule saseMorocco sigudla umngcele ne-Algeria; amakamela endunduma yamakamela kanye nesihlabathi ayigama lomdlalo lapha
IRabat - Inhlokodolobha yaseMorocco; khululeka futhi kungenazinkinga, amaphuzu avelele afaka umbhoshongo wekhulu le-12th ne-minaret.
Casablanca - Lo muzi wanamuhla ngasolwandle uyindawo yokuqala yezivakashi ezindiza ezweni. Uma unesikhathi, ama-medina angokomlando nama-mosque anamuhla (owesithathu ngobukhulu emhlabeni) alungele usuku ntambama
UFez - I-Fez inhlokodolobha yangaphambili yaseMorobha futhi ingelinye lamadolobha amakhulu nasendulo emhlabeni.
Marrakech (Marrakesh) - IMarrakech iyinhlanganisela ephelele yeMoroka yakudala neyintsha. Hlela ukuchitha okungenani izinsuku ezimbalwa uzulazula umehluko omkhulu wesikhumbuzo namanxiwa e-medina. Indawo enkulu ye-Djeema El Fna kusihlwa akufanele iphuthelwe yize inani elikhulu kakhulu nokuvakasha kwabavakashi kungavunyelwa ukubekelwa abanye.
Meknes - Idolobha elilele emuva elinikezela ikhefu elamukelekayo elivela ekuqothuleni izivakashi komakhelwane uFez. Wake waba inhloko-dolobha yombuso futhi ugcina izindonga zawo ezinwebekile kanye "nedolobha elidala" elincane kodwa elifana nelikaFez. Kunezindawo eziningi zezivini endaweni ezungeze iMeknes.
I-Ouarzazate - Ibhekwa njengeNhloko-dolobha yaseNingizimu, i-Ouarzazate iyisibonelo esihle kakhulu sokulondolozwa kanye nokuvakasha okungazange kuchithe umuzwa wedolobha elihle nelidala.
Tangier -Tangier indawo yokuqala yezivakashi eziningi ezifika ngesikebhe kusuka Spain. I-charm eshukumisayo ebikade iheha abaculi abaningi (uMatisse), abaculi (uHendrix), osopolitiki (Churchill), ababhali (Burroughs, Twain) nabanye (Malcolm Forbes).
Taroudannt - Idolobha elisemakethe eliseningizimu.
ITetouan - Amabhishi amahle futhi ayisango eliya ezintabeni zaseRif.
I-Al Hoceima - Idolobha lasebhishi ogwini lweMedithera
nLaayoun eMorrocco Western Sahara, eyaziwa ngokudla kwasolwandle, futhi icabanga njengenhloko-dolobha yaseSardines emhlabeni.
IDakhla yidolobha laseMorocco Western Sahara elaziwa ngokudla kwasolwandle kanye nolwandle lwalo nangamabhishi, liyazi futhi ngama-surf.
I-Agadir - i-Agadir yaziwa kakhulu ngamabhishi ayo. Idolobhana liyisibonelo esihle seMorocco yanamuhla, engagcizeleli kangako emlandweni nakwisiko. ENyakatho nedolobha lase-Auorir naseTamri kukhona amabhishi amahle
I-Amizmiz - Njengoba inesinye sezikhumbuzo ezinkulu kakhulu zeBergber ezintabeni eziphakeme zase-Atlas njalo ngoLwesibili, i-Amizmiz indawo ethandwayo yabahambi abafuna uhambo losuku olutholakala kalula (cishe ihora) ukusuka eMarrakech
Chefchaouen - Idolobha elisezintabeni elisanda kungena ngaphakathi Tangier kugcwele imicibisholo enomoya omhlophe ohlanjiwe, iminyango eluhlaza okwesibhakabhaka nezihlahla zomnqumo, iChefchaouen ihlanzekile njengekhadi leposi nokubalekela okuhle eTangier, kuvusa umuzwa wesiqhingi saseGreek
I-Essaouira - Idolobha lasendulo eliseceleni lolwandle elisanda kutholwa yizivakashi. Kusukela maphakathi noJuni kuya ku-Agasti amabhishi agcwele phama kepha noma yisiphi isikhathi futhi uzoba ukuphela komuntu lapho. Umculo omnandi nabantu abakhulu. Eduze ne Coasta kusuka Marrakech
I-Imouzzer idolobhana lendabuko laseBerber elakhiwe eziNtabeni ze-Atlas, indawo enhle enamanzi amahle. Imisebenzi yezandla emihle kakhulu, uwoyela wama-argan kanye nobucwebecwebe.
I-Merzouga ne-M'Hamid - Ukusuka kwenye yalezi zindawo ezimbili emaphethelweni eSahara, gibela ikamela noma i-4 × 4 ehlane ubusuku obubodwa (noma isonto) phakathi kwezindunduma nangaphansi kwezinkanyezi.
I-Tinerhir - Leli dolobha liyiphuzu elifanelekile lokufinyelela kwi-High Atlas emangalisayo.
IVolubilis - I-30km eNyakatho neMeknes, enamanxiwa amakhulu amaRoma eMorocco, eduze nedolobha elingcwele iMoulay Idriss
I-Royal Air Maroc - Ngokuvamile eyaziwa ngokuthi i-RAM, iyisithwali sezwe saseMorocco, kanye nendiza yezwe enkulu kunazo zonke. I-RAM ingumnikazi ophethwe nguhulumeni waseMorocco ngokugcwele, futhi inendlunkulu yayo ngokwesizathu se CasablancaIsikhumulo sezindiza iAnfa.
Inethiwekhi yomgwaqo omkhulu isesimweni esihle. Izindawo zomgwaqo zinhle kepha imigwaqo incane kakhulu, ezimeni eziningi umgwaqo omncane munye kuphela. Qaphela ukuthi imigwaqo eminingi eningizimu emakwe njengokuvalwa uphawu empeleni ingumgwaqo owodwa kuphela ovalelwe ngamahlombe obanzi ozosetshenziswa njalo lapho uhlangana nethrafikhi ezayo.
Ukushayela ngokuphepha eMorocco kuthatha umkhuba nokubekezela kepha kungakuyisa kwezinye izindawo ezinhle ngempela.
Amafemu wokuqasha ayanda emadolobheni amakhulu. Amanethiwekhi amaningi okuqasha emhlabeni wonke anamahhovisi eMorocco. Kukhona nezinkampani ezimbalwa zokuqasha zasendaweni (i-5-7 inamahhovisi okuphendula esikhumulweni sezindiza saseCasablanca). Banikela ngamanani aphansi.
Abanye abaqhubi bezokuvakasha bazokuhlelela ukuthi uqashe i-4 × 4 noma i-SUV enomshayeli / umhlahlandlela, futhi banikeze uhambo olukwenziwa ngokwezifiso, kufaka phakathi ukubhuka okuthuthukile emahhotela, ama-riads, njll. Iningi labashayeli balwazi kahle izilimi zaphesheya (isiFulentshi, isiNgisi, ISpanishi…).
IsiFulentshi nesi-Arabhu sihlala ndawonye ekuphathweni kanye nasezentabeni zaseMoroccan.
Kungakhuthaza kakhulu ukuvakasha kwakho, kwandise ukuqonda kwakho kwezibonakaliso nezaziso, futhi kugweme izimo ezinzima uma ungafinyelela esikoleni sakho esiphakeme isiFulentshi noma ukuqala inkambiso yesi-Arabhu. Abanye abanikazi bezitolo nabaphathi bamahhotela ezikhungweni zasemadolobheni nabo bakhuluma isiNgisi
Okufanele ukwenze futhi ukwenze eMorocco.
Ungalindeli ukubona amabhange amaningi kuma-souqs noma kuma-medinas, yize emadolobheni amakhulu kuvame ukuba ne-ATM eduze kwamasango amakhulu, futhi kukodwa noma okubili ngaphakathi kwamasouq amakhulu. Ungahle uhlangane nabantu “abasizayo” abazoshintshana ngamadola noma ama-euro nge-dirhams. Ukushintshana okungekho emthethweni emigwaqweni engaphandle kwesouqs noma ama-medinas kubonakala ngathi akukhona.
Ngaphandle kwamabhange namahhovisi okushintshana anikezelwe, amahhovisi amakhulu okuthumela anikezela ngokushintshaniswa, futhi asebenze kuze kube sebusuku kakhulu. Kunamahhovisi amaningi okushintshana esikhumulweni sezindiza i-Casablanca.
Ama-ATM atholakala eduze kwamahhotela abavakashi nasezifundeni zanamuhla ze-ville nouvelle. Qiniseka ukuthi i-ATM yamukela amakhadi aphesheya (funa ama-logo amaMaestro, Cirrus noma ama-Plus) ngaphambi kokufaka ikhadi lakho.
Amabhizinisi amaningi eMorocco amukela amakhadi wesikweletu (Emadolobheni amakhulu Yebo). Lezo ezenziwayo kungenzeka zamukele i-Visa noma i-MasterCard kodwa kwesinye isikhathi zivame ukufaka inani lokukhokhisa ukukhokha izindleko zokucubungula ukuthengiselana kwakho.
Ngaphandle kwezikhumbuzo eziyisikhumbuzo zabavakashi ezinjengemakhadibhodi namathikithi, nazi izinto ezivela kulesifunda okunzima ukuzithola kwenye indawo, noma zihlukile:
I-Leatherware: IMorocco inokukhiqizwa okukhulu kwezimpahla zesikhumba. Qaphela ezinye izimakethe zigcwele amamodeli we-Mediocre. Izitolo zomklami zitholakala ezitolo ezinkulu.
Amafutha e-Argan nemikhiqizo eyenziwe ngawo efana nensipho nezimonyo.
Ama-Tagalog: Izitsha zokupheka zakudala zaseMorocco ezenziwe ngobumba zizothuthukisa ukudla okwenziwe ngamafutha / emanzini okwenzayo uma uhlela ukuletha iMorocco ekhishini lakho ekhaya.
I-Birad: Izimbiza zetiye zakudala zaseMorocco.
I-Djellabah: Ingubo ye-Classic Moroccan eyakhiwe ngengubo ene-hood. Imvamisa kuza ngemiklamo eyinkimbinkimbi kanti eminye ilungele isimo sezulu esifudumele kanti ezinye izitayela ezinobunzima zingezokubanda. I-Chefchaouen yindawo enhle yokuthenga i-djellaba esindayo yoboya.
Amakhaphethi: Amakhaphethi enziwe ngezandla kaBerber angathengwa ngqo kubazingcweti abazisebenzisayo. Uma uya emadolobhaneni amancane, njenge-Anzal, esifundazweni sase-Ouarzazate, ungavakashela abaluki, ubabuke besebenza, futhi bazokujabulela ukukunikeza itiye bakukhombise imikhiqizo yabo.
Izinongo: Ngaphandle kwama-medinas (ashibhile) emadolobheni ashisayo awomile (ikhwalithi ephezulu) kuzoba kuhle kakhulu.
Uma ufuna ama-T-shirts, cabanga ngezinto zomklami ezenziwa nguKawibi-zibukeka zidangalisa kakhulu kunezingqikithi zendabuko ezijabulisayo. Zitholakala ezitolo ezisebenza mahhala, i-Atlas Airport Hotel eduze kweCasablanca nakwezinye izindawo.
AmaGeode: Ama-quartz apende nopende obudaywe kakhulu adayiswa kakhulu kanye nama-fake galena geode avame ukuhunyushwa ngokuthi “cobalt geodes”.
Imfucumfucu yeTrobobite: Ngaphandle kokuthi uchwepheshe, kungenzeka ukuthi uthenga inkohliso.
Khumbula ukuthi ukuxoxisana ku-souks kulindeleke. Akunakwenzeka ngempela ukunikeza inkomba enembile yokuthi ungaqala malini maqondana nentengo yokuqala yokubuza, kepha umbono ojwayelekile kuzoba ukuhlose cishe i-50%.
Ukuthi uzodlani eMorocco
Yize liyizwe elinabantu abaningi abangamaSulumane, iMorocco ayomile. Ungathenga ngokusemthethweni utshwala uma uyi-18. Noma kunjalo, akunakubalwa iminyaka yokuphuza esemthethweni.
Utshwala buyatholakala ezindaweni zokudlela, ezitolo zotshwala, imigoqo, izitolo ezinkulu, amaklabhu, amahhotela kanye nama-disc. Amanye amaMoroccans athokozela isiphuzo yize kungamukeleki ezindaweni zomphakathi. Uhlobo lwasendaweni lokuzikhethela luthwala igama lasekuqaleni kakhulu Casablanca Ubhiya. I-lager enongiwe egcwele futhi ijabulisa nge-cuisine yendawo noma njengokuqabuleka. Amanye amabhiya amakhulu amabili aseMorocan yiFlag Special neStork. Futhi ungathola i-vodka vude ye-judeo-berber, i-anise emnene enongiwe futhi eyenziwe kabusha ngamakhiwane.
Njengomthetho, ungawaphuzi amanzi ompompi nhlobo eMorocco, ngisho nasemahhotela, ngoba uqukethe amazinga aphezulu kakhulu amaminerali kunamanzi aseYurophu.
Amanzi asemabhodleleni atholakala kabanzi. Izinhlobo zamanzi ezidumile zibandakanya i-Oulmes (ekhazimulayo) noSidi Ali, uSidi Harazem no-Ain Saiss DANONE (namanje). Lesi sakamuva sinambitha omncane wamaminerali nensimbi. Akukho lutho olunamaminerali amaningi akhiqizwayo (kuze kube manje?).
Noma yimuphi umhambi uzonikezwa (kwesinye isikhathi okumnandi kakhulu) itiye le-mint okungenani kanye ngosuku. Endaweni eyaziwa ngokuthi yi "Moroccan whiskey" ngenxa yokufana kombala wayo, izibuko ezincane zivame ukudakwa kuzo, nokuthi amaMoroccans amaningi awabuphuzi utshwala, ngisho neMorocan enesizotha ngokwezezimali ifakwe ebhodweni letiye, izingilazi ezimbalwa , nesimo sengqondo esicishe sibe nenhlonipho yokwabelana ngalesi siphuzo nesihambi. Kwesinye isikhathi okuthengelwayo kungokuheha okwezitolo ngaphezu kokubonisa izihambi - sebenzisa ukuhlakanipha kwakho ukuthola ukuthi uzokwamukela nini. Ngaphambi kokuphuza, bhekisisa umninikhaya wakho bese uthi “ba saha ou raha”. Kusho "ukujabulela futhi uphumule," futhi noma ngubani wasekhaya uzothokozelwa ngamakhono akho olimi.
Qaphela ukuthi owesifazane ohamba yedwa angazizwa enethezekile xaxa ngokuphuza noma esidliwayo esidayisa ngotshani noma endaweni yokudlela njengoba amakhofi kungokwendabuko ngokwesiko kwabesilisa. Lokhu akusebenzi kumibhangqwana.
AmaMoroccans asewuthathile ngempela ku-inthanethi. Amakhofi e-Intanethi avulwa sekwephuzile futhi maningi emadolobheni namadolobhana amancane abona ukuvakasha okukhulu kwabavakashi. Ijubane lamukeleka ngokuhle enyakatho, kepha lingaba yincanyana ohlangothini oluhamba kancane ezindaweni zasemakhaya. Amakhofi amaningi e-inthanethi azokuvumela ukuthi uphrinte futhi ushise ama-CD ngemali encane.
AmaMoroccans nawo athuthele ekusibekweni i4G. Kukhona ukufinyeleleka okuhle kwe-imeyili ne-inthanethi ngeZingcingo Zeselula futhi kushibhile. Ngenxa yalokhu, kunezindawo zokudlela ezimbalwa ze-Intanethi ezindaweni zabavakashi. Kukhona ukufinyelela kwe-4G kuzo zonke izintaba nasehlane, kanye nakuwo wonke amadolobha.
Idolobha elingumlando laseMeknes
Isiza Sokuvubukula seVolubilis
UMedina waseTétouan (ngaphambili owaziwa ngokuthi iTitawin)
UMedina wase-Essaouira (owayekade eyiMogador)
I-Portuguese City of Mazagan (El Jadida)
IRabat, Inhlokodolobha Yesimanje nedolobha Lomlando: Amagugu Ahlanganyelwe